Shirkado Mashiinka Qaboojiyaha Ka Hortegaya Bacriminta Shirkadaha iyo Warshad | YiZheng
Mashiinka Qaboojinta Qulqulka Kaabashada waa jiil cusub oo qalabka qaboojinta ah oo leh qaab qaboojiye u gaar ah. Dabaysha qaboojinta iyo qalabka qoyaanka badan ayaa samaynaya dhaqdhaqaaq gadaal u socda si ay tartiib tartiib ah oo isku mid ah u qaboojiyaan
Muxuu yahay Mashiinka Qaboojinta Qulqulka Tilaabada?
Jiilka cusub ee Mashiinka Qaboojinta Qulqulka Kaabashada cilmi baaris iyo horumarin ku sameysay shirkadeena, heerkulka walxaha ka dib qaboojinta ma ahan mid ka sareeya heerkulka qolka 5 ℃, heerka roobabku ma ahan wax ka yar 3.8%, soo saarida jiir tayo sare leh, sii dheeree waqtiga keydinta ee jiirka iyo hagaajinta faa'iidooyinka dhaqaale ayaa door muhiim ah ka ciyaaray. Waa nooc si weyn dibedda looga isticmaalo waana bedel horumarsan oo ah qalabka qaboojinta dhaqanka.
Mabda'a Shaqada ee Mashiinka Qaboojinta Qulqulka Kaabashada
Marka walxaha ka yimaada mashiinka qalajinta ay maraan Mashiinka Qaboojinta Qulqulka Kaabashada, waxay la xiriiraan hawada hareeraha ah. Ilaa iyo inta jawigu buuxsamayo, wuxuu biyaha ka qaadayaa dusha jajabyada. Biyaha ku dhex jira qaybaha ayaa loo dhaqaajiyaa dusha sare iyadoo la marinayo qurubyada bacrimiyeyaasha ka dibna la qaadayo uumiga, sidaa darteed qeybaha bacriminta ayaa la qaboojiyaa. Isla mar ahaantaana, kuleylka hawadu qabato, taas oo hagaajinaysa awoodda qaadista biyaha. Hawada ayaa si joogto ah looga sii daayaa marawaxaddu si ay uga qaaddo kuleylka iyo qoyaanka granules-ka bacriminta ee qaboojiyaha
Codsiga Mashiinka Qaboojinta Flow Counter
Badanaa waxaa loo isticmaalaa qaboojinta qalabka granular heerkulka sare ka dib marka la isku daro. Mashiinka wuxuu leeyahay hawo qaboojiye u gaar ah. Hawada qaboojinta iyo heerkulka sare iyo qalabka huurka badan ayaa u dhaqaaqa dhinaca ka soo horjeedka, sidaa darteed qalabka ayaa si tartiib tartiib ah loogu qaboojiyaa kor ilaa hoose, iyadoo laga fogaanayo dusha sare ee dusha sare ee walxaha ay keeneen qaboojiyaha guud ee tooska ah sababtoo ah qaboojinta degdegga ah.
Faa'iidooyinka Mashiinka Qaboojinta Flow Counter
Ku Mashiinka Qaboojinta Qulqulka Kaabashada wuxuu leeyahay saameyn qaboojin wanaagsan, heer sare oo otomaatig ah, buuq hooseeya, hawlgal fudud, iyo dayactir hooseeya. Waa nooc si weyn dibedda looga isticmaalo waana qalab casri ah oo qaboojiye ah.
1】 Heerkulka qurubyada la qaboojiyey kama badna + 3 ℃ ~ +5 ℃ heerkulka qolka; roob = 3.5%;
【2】 Waxay leedahay hawsha gaarka ah ee dheecaanka pelletka otomaatigga ah markii la xidhayo;
【3 cooling Qaboojinta dharka iyo heerka burburka oo hooseeya;
【4 structure Qaab dhismeed fudud, kharash yar oo hawl socodsiin iyo shaqo qabad yar;
Mashiinka Mashiinka Qaboojinta Qulqulka Kaabashada
Xulashada Mashiinka Mashiinka Qaboojinta Qulqulka
Mugga qaboojinta (m)
Hore: Gubista Dhuxusha Dhaca
Xiga: Mashiinka Mashiinka Wareega ee Rotary
Hordhac Waa maxay Mashiinka Mashiinka Bacriminta Mashiinka Mashiinka Labaad? Mashiinka Mashiinka Bacriminta Double Shaft waa qalab isku dhafan oo wax ku ool ah, inta dheer ee taangiga ugu weyn, ayaa si fiican u saameynaya isku dhafka. Qalabka ceyriin ee ugu muhiimsan iyo qalabka kale ee kaabayaasha ah waxaa lagu quudiyaa qalabka isla waqtigaas oo si isku mid ah ayaa loo qasaa, ka dibna waxaa loo qaadaa b ...
Hordhac Waa maxay Mashiinka Mashiinka Mashiinka Bacriminta Mashiinka Bacriminta? Mashiinka granulation Double-Screw Extrusion waa tiknoolajiyad cusub oo kala geddisan oo ka duwan kala sooc dhaqameedka, kaas oo si ballaaran loogu isticmaali karo quudinta, bacriminta iyo warshadaha kale. Granulation waa geedi socod muhiim ah gaar ahaan granulation budada. Waa n ...
Hordhac Muxuu Yahay Nooca Cusub ee Noolaha & Bacriminta Granulator Bacriminta? Nooca Cusub ee Noolaha Organic & Compound Bacriminta Granulator waa qalab ka kooban inta badan loo isticmaalo soo saarista bacriminta isku dhafan, bacriminta dabiiciga ah, Bacriminta bayoolojiga, Bacriminta la sii daayo ee la xakameeyo, iwm .Waxay ku habboon tahay qabow ballaaran iyo ...